Maamulka Baay oo hay?adaha samafalka ugu baaqay in dib ugu noqdaan gobolka xili ay xaalad jirto – Radio Daljir
Maamulka Baay oo hay?adaha samafalka ugu baaqay in dib ugu noqdaan gobolka xili ay xaalad jirto
Seteembar 23, 2013 5:13 b 0
Baydhabo, September 23, 2013 – Maamulka degmada Baydhabo ee xaruunta gobolka Baay ayaa shaaca ka qaaday in ay jirto baahi weyn oo bulshada ay qabaan gaar ahaan dadka Baragkacayaasha ah ee ku sugan gudaha magaalada iyo deegaanada ku dhow.
Gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka degmada gaar ahaan dadka Baragkacayaasha ay u baahan yihiin adeegyo dhowr ah, isla markaasna ay jirto xaalad bini?adanimo.
?Hay?adihii horey gobolka uga baxay waxaan ku boorinaynaa in ay dib u soo noqdaan howlaha samafalkana sii wadaan, xaalad adag ayey ku jiraan dadka qeybtood, guulo ayaa laga gaaray amniga? ayuu yiri Xasan Macalin Axmed.
Waxaa uu ka dalbaday hay?adhaa samafalka kala gedisan in ay gargaar la soo gaaraan dadka aan wax haysan ee yimi magaalada Baydhabo, wakhtigii abaaraha iyo macaluusha daran ay ka dhacday dalka Soomaaliya.
Puntland oo canbaaraysay weerarka Westgate xili madaxweyne Faroole tacsi u diray Uhurru (Dhegeysi)
Cali dheere ?ragga haysta Westgate waxay amar u qabaan in ay talaabo kasta qaadaan? (Dhegeyso)